DIIWAANKA Comco Ikarus C42 Red-Cross FSX & P3D - Rikoooo
downloads 15 615
Byron Warwick. FSX/P3D beddelaad hooyo & dib-u-soo-celin & dib-u-soo-iibin ay Rikoooo.com
Updated on 31 / 08 / 2018: Moodeelka loo yaqaan '3D' oo loo beddelay hooyo FSX iyo Prepar3D Qaabka v4, ayaa loo sameeyay "khariidad caadi ah" (Buug) dareen-celinta, rakibaadda v10.5, sixitaanka dhibaatooyin badan oo muuqaal ah, hagaajinta moodhalka '3D', animation-ka albaabbada ee qaabka VC.
version Tan waxaa loo sameeyey dadka aawadiis ee FSX & P3D, Si ay u soo bixi version ah la jaan FS2004 riix halkan
Thanks to Joel Soler, agaasimaha maamulka oo ka mid ah howlgalka Arc-en-Ciel iyo rabitaankiisa ah diyaarad, waxay dalab Faransiis Red Cross-in carruurta naafada ah iyo dadka waaweyn fursad ay ku ogaadaan oo farxad u ah oo duulaya saarnaa ah Icarus C-42 Ultra-Light.
goolka Arc-en-Ciel waa in kor loogu qaado kara qofka kasta. Waxa inta badan waxa muujiyay xulka adag-shaqada: 70% doonniyawadayaashaada Arc-en-Ciel waa xaalad ka mid ah naafada (dhago la'aan, paraplegia ..)
Waxaa xamaasad waa in aynu si farxad leh ku dhawaaqo Rikoooo ee (www.Rikoooo.com) Iskaashi la Arc-en-Ciel!
Mr. Erik Bender, Abuure ah "Rikoooo" website-ka si fiican u yaqaan for duulista iyo jilidda duulimaadka caashaqi jiray, iyo Mr. Thomas Guiart iskood aqbalay codsiga iyo abuuray rinjiyeeyeen ah saxda ah ee C42 Ikarus, qurxiyey Red Cross-'midabo saxiixa. Sidoo kale u mahad Mr. Byron Warwick for model 3D ah.
Thanks to soo dejisashada bilaashka ah ee lagu soo bandhigo websaydhka, qof walba wuxuu hadda isticmaali karaa midka keliya ee 'Red-Cross' Ikarus si uu u yeesho khibrad khaas ah oo khadka tooska ah ah oo leh duulimaad ah 'Flight Simulator 2004' iyo Flight Simulator X® (oo ay leedahay Microsoft by iyo Prepar3D v1 iyo v2® oo uu qoray Lockheed Martin®).
Iyada oo iskaashigan Laanqayrta Cas ee Faransiiska uu rabo inuu waasac dambidhaafkiisu ay uga go'an tahay ku wajahan dadka naafada ah, si ay u soo jiitaan dadka ku wajahan sababta Arc-En-Ciel ee; iyo ugu dambeyntii in la helo maal awood si firfircooni hawlgalka.
Waayo, Red-Cross 'guuradii 150th, Rikoooo iyo kooxda Arc-en-Ciel ee bixiyaan kuu iman oo dhan saarnaa oo ay sii wadaan ku lug ururka ee Duulista iyo taariikhda. Sida saxda ah boqol sano ka hor, caawimo Red Cross-'la siiyey dagaalka ee WW1 mahad ay u kaliyeeli eryeen.
Red Cross-"Operation Arc en Ciel" in Partership la Rikoooo
link Faa'iido leh: Page Facebook hawlgalka Arc en Ciel
Ladd-on : Boorso complet avec qol virtuel, aaladaha et wiilal personnalisés
Qore: Byron Warwick. FSX/P3D beddelaad hooyo & dib-u-soo-celin & dib-u-soo-iibin ay Rikoooo.com